इस्मामा एमालेबाट हिरा एसी अध्यक्षका उम्मेदवार - Gulminews
इस्मामा एमालेबाट हिरा एसी अध्यक्षका उम्मेदवार
२०७९ बैशाख ८, १२:५९
गुल्मी, ०८ वैशाख । नेकपा एमालेले इस्मा गाउँपालिकामा हिरा एसीलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउने भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारको लागि चारजनाको नाम सिफारिस भएपनि एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले एसीलाई उम्मेदवार बनाउने गरि निर्णय गरेको पार्टीका गाउँकमिटी अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम कुँवरले जानकारी दिए । एमालेबाट गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नका लागि हालका गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट, समन्वय समिति प्रमुख लक्षमण पराजुली, महिला नेतृ ललिता गौतम र एसीको नाम सिफारिस भएको थियो । उपाध्यक्षको लागि एमालेबाटै चारजनाको नाम सिफारिस भएपनि अझैसम्म टुंगो लागेको छैन ।
०५६ सालमा एमालेको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका एसी ०६१ सालमा अनेरास्ववियु गुल्मीको अध्यक्ष भए । ०६३ सालमा अनेरास्ववियुको दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष र एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य भए । त्यसैगरि ०६५ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रिय सदस्य एवम् गुल्मी जिल्ला इन्चार्ज भए । ०६६ सालमा एमालेको जिल्ला सचिवालय सदस्य भएका एसी नेकपा हुँदा जिल्ला कार्यालय सदस्य र ०६७ मा तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टका स्वकीय सचिव भएका थिए । अहिले उनी एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य छन् । उनले एम्.ए., बी.ए. र एल्.एल्.बी. गरेका छन् । साथै अधिवक्ताको रुपमा नेपाल बार एसोसियनको सदस्य रहेका छन् ।
आफु लामो समयदेखि नेकपा एमालेको माध्यमबाट समाज रुपान्तरणमा लागेको र इस्मामा एमालेको संगठन बलियो भएकोले निर्वाचन आफुले जित्नेमा विश्वस्त भएको एसीले प्रतिक्रिया दिए । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा इस्मामा एमालेका लक्षमण बहादुर विष्ट पाँच हजार ५५ मतसहित विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी काँग्रेसका चन्द्र बहादुर महतले चार हजार मत ल्याएका थिए । इस्मामा वडा नम्बर १ हस्तिचौरमा काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने अन्य पाँचवटा वडामा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।